December 2018 – Page3– Swel Sone News – NEW VPS
ယနေ့ အသက်(၁၉)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကို ကျရောက်လာတဲ့ သရုပ်ဆောင်ခင်လှိုင်ရဲ့သမီးချောလေး သဇင်ထူးမြင့်
ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းကျော်အနပညာရှင်ကြီး ခင်လှိုင်ကတော့ အောင်မြင်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းသရုပ်ဆောင်တွေထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ဇာတ်ရုပ်အမျိုးမျိုး သရုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့ အနပညာရှင် တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပြီး စွယ်စုံရပြည်သူချစ် ဟာသသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူချစ်အနပညာရှင်တစ်ယောကိဖြစ်တဲ့ ခင်လှိုင်ကတော့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။ခင်လှိုင်ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ သမီးလေး သဇင်ထူးမြင့်ကတော့ ဒီနေ့မှာ မွေးနေ့ကျရောက်လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁)ရက်နေ့ကတော့ သရုပ်ဆောင် ခင်လှိုင်ရဲ့ လိမ္မာပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေး သဇင်ထူးမြင့် ရဲ့ အသက် (၁၉)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူမ အတွက် ပရိတ်သတ်ကြီးက မွေးနေ့ဆုတောင်း ပေးခဲ့အုံးနော် 😍👧🎂🎊
သင်ဇာဝင့်ကျော် အတွက် သီချင်းတစ်ပုဒ်. . .ဒီ Video လေးကို သင်ဇာဝင့်ကျော်တွေ့ပါစေ.
သရုပ်ဆောင် သင်ဇာဝင့်ကျော်တစ်ယောက်ကတော့ ဖေ့ဘုတ်သုံးစွဲသူတွေကြားမှာအမြဲလိုလို ဂယက်ထစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် သူမရဲ့ ပွဲတက်ဖက်ရှင်တွေဟာ ဆက်စီဘက်ကိုသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဝေဖန်သူပရိသတ်တွေများပြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အာင်သီရိစိန်တိုက်ဖွင့်ပွဲမှာ ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ သူမဖက်ရှင်ပေါ်မှာလည်း ဝေဖန်မှုတွေရှိပြီးတဲ့နောက် သူမက ဒီနှစ်ကုန်အထိ ပွဲတွေလက်ခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အနည်းငယ်လွန်သွားရင် တောင်းပန်ပါတယ်လို့ ပရိသတ်တွေကို မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီလိုမေတ္တာရပ်ခံခဲ့တဲ့နေရာမှာလည်း သူမအနေနဲ့ အရမ်းကြီး ခပ်ဟော့ဟော့ ဝတ်ဆင်တော့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ လုံးဝမဝတ်တော့ဘူးလို့ ပြောဆိုတာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါသေးတယ်။ သူမအနေနဲ့ ပွဲတက်ဝတ်စားမှုတွေကိုတော့ ဝတ်ဆင်နေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူမရဲ့ ဖက်ရှင်တွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ပရိတ်သတ်တော်တော်များများက ဝေဖန်နေသလို ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကလဲ သူမကို ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ မဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ် သူမရဲ့ ဖက်ရှင်တွေကို လက်မခံနိုင်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေက ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ သင်ဇာဝင့်ကျော်အတွက် သီချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ သီဆိုထောက်ပြလိုက်တဲ့ Video လေးပါဒီ Video လေးကို သင်ဇာဝင့်ကျော် တွေ့ပါစေ Video ကြည့်ရန် Credit-
301.2 ပေါင်ကနေ 159.4ထိ ချပြီး Winner ဆုရရှိသွားတဲ့ သရုပ်ဆောင် မိုးယုစံမောင်လေး
နိုင်ငံကျော် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး မိုးယုစံ ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ သူလေးပါ။ မိုးယုစံ ရဲ့ မောင်လေး ဖြစ်သူ ဆန်းလင်း ထွန်းက အရမ်းကိုဝလွန်းနေတာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဝလွန်သူများ ယှဉ်ပြိုင်ရတဲ့ Lose2Win with Andy ပြိုင်ပွဲ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ဝိတ်ချခဲ့ရာမှ ယခုအခါမှာတော့ ဝိတ်အချနိုင်ဆုံး Winner ဆုရရှိခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။မိုမိုလေးချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် မိုးယုစံ ရဲ့ မောင်လေး ဆန်းလင်းထွန်းရဲ့ ပုံရိပ်ကလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆန်းလင်းထွန်း ရဲ့ ဝိတ်က 301.2ပေါင်ရှိခဲ့ပြီး လူငယ်ပီပီ Fashion ကျကျဝတ်စားရတာကို သဘောကျတဲ့ ဆန်းလင်းထွန်းက သူရဲ့ အ၀လွန်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့် အခက်ကြုံနေရသူပါ။ ဒါ့အပြင် ဆန်းလင်းထွန်းရဲ့နေ့စဉ်ဘ၀မှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေက သူ့ကို Lose2Win with Andy ပြိုင်ပွဲမှာလာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖြစ်ဖို့ တွန်းအားတွေ ဖြစ်စေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။...
အဖွားနဲ့အတူ ရွှေတိဂုံဘုရားကို သွားရောက်ဖူးမျှော်ခဲ့တဲ့ စိုးပြည့်သဇင်
ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်လေးစိုးပြည့်ကတောကအနပညာလောကရဲ့အောင်မြင်နေတဲ့ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်ပြီးအောင်မြင်မှုသရဖူတွေကိုရယူပိုင်ဆိုင်ထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်။စိုပြည့်ကတော့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကောင်းမွန်လွန်းတာကြောင့်အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ အကယ်ဒမီတွေရရှိသည်အထိ အောင်မြင်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ စိုးပြည့်သဇင်ကတော့ဖြူစင်တဲ့အပြုံးလှလှလေးတွေနဲ့စကားပြောလိုက်တိုင်းညင်သာမှုအပြည့်နဲ့ပြောဆိုတတ်သူလေးဖြစ်ပါတယ်။စိုးညီအစ်မတွေထဲမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိုးပြည့်ကတော့စိုးမြတ်သူဇာ၊စိုးမြတ်နန္ဒာ၊စန္ဒီမြင့်လွင်နဲ့အတူလက်ရှိမှာပိုးထည်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကို အတူပူးပေါင်းတည်ထောင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ယနေ့မှာတော့ စိုးပြည့်တစ်ယောက် အဖွားဖြစ်သူနဲ့ အတူ ရွှေတိဂုံဘုရားကိုလာရောက်ဖူးမျှော်ခဲ့ပါတယ်။ စိုးပြည့်ကတော့ ” ဘွားဘွားနဲ့ရွှေတိဂုံဘုရားဖူး….ဘုရားပေါ်မှာအေးချမ်းလိုက်တာ”ဆိုပြီးရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်စိုးပြည့်တစ်ယောက် အဖွားနဲ့အတူ ဘုရားကို ဖူးမျှော်ခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ CRD-myanmarload
တန်ဖိုးရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေဆိုတာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိသူတွေပါ
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးဟာ သူများက သတ်မှတ်ပေးရတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သတ်မှတ်တာမျိုးပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ သူ့ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းတွေက သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကို ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ တန်ဖိုးရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေဟာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် ဘယ်လိုပြုမူတတ်သလဲ၊ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတတ်သလဲ ပြီးတော့ ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်ရှိသလဲ ဆိုတာပါပဲ။ တကယ်လို့ သင်ဟာဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေခဲ့ရင် တန်ဖိုးရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်အဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ။ (၁) မချစ်သင့်တဲ့သူကို မချစ်ဘူး ဒီလိုမိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ မချစ်သင့်တဲ့သူတွေကို ဘယ်တော့မှ ချစ်မိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ သူတို့ဟာ ကိုယ်ကျင့်တရားဖောက်ပြန်တာ၊ လူမှုရေးဖောက်ပြန်တာမျိုးတွေကို အရမ်းမုန်းပြီး အဲလိုမဖြစ်အောင်လည်း အရမ်းဂရုစိုက်ကြပါတယ်။ မချစ်သင့်တဲ့သူမျိုးကိုဆို အစကတည်းက မပတ်သက်မိအောင် နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လည်းသူတို့ဟာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး နာမည်ပျက်မရှိပါဘူး။ (၂) ကိုယ့်ကိုမလိုချင်တဲ့သူဆီမှာ မတွယ်ကပ်ဘူး ဒီလိုမိန်းကလေးတွေဟာ လူတစ်ယောက်ကိုယ့်ကို မချစ်တော့ဘူး၊ မလိုချင်တော့ဘူး၊ ကောင်းကောင်း တန်ဖိုးမထားတော့ဘူးဆိုရင် အဲဒီ့လူဆီမှာ အောက်ကျနောက်ကျခံပြီး တွယ်ကပ်နေမယ့်သူမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကို...
2018 အတွင်းမွေးတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် ဆယ်လီမျိုးဆက်သစ်လေးတွေ
ကိုယ်တွေချစ်တဲ့ ဆယ်လီတွေ အနုပညာရှင်တွေဟာလည်း လူသားတွေပဲဖြစ်တဲ့အလျောက် ဘဝအဖော်ရှာပြီး ချစ်စရာမြတ်နိုးစရာရင်သွေးလေးတွေမွေးကြမှာပါပဲ။ ပရိသတ်တွေကတော့ နဂိုကတည်းက ကိုယ်ချစ်ခင်ရင်းစွဲရှိတဲ့ အနုပညာရှင်တွေရင်သွေးလေးတွေရလာတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့မျိုးဆက်သစ်လေးတွေကိုပါ အလိုလိုလိုက်ချစ်မိတော့တာပါပဲ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ 2018 အတွင်းမွေးဖွားလာတဲ့ ဆယ်လီမျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေကို ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြောချင်လွန်းလို့ ကနေ စစ်တမ်းကောက်ယူတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဂျင်းကောင်ပေါက်စလေး နာမည်ကိုကြားတာနဲ့ဘယ်သူ့ကလေးလေးလဲဆိုတာ တန်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ မြင့်မြတ်ရဲ့သားဦးလေး နာမည်ကျော်ဂျင်းကောင်ပေါက်စလေးပါပဲ။ ဂျင်းကောင်ပေါက်စလေးဟာဆိုရင်ဖြင့် 2018 ခုနှစ် August လ7ရက်နေ့မှာ ဖွားမြင်ပါတယ်။ သားဦးလေးဖြစ်လို့ မြင့်မြတ်က အသဲတုန်အူတုန်ဖြစ်နေအောင်ချစ်သလို ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်လေးလည်းဖြစ်လာရပါတယ်။ ချစ်ချစ်တုန် သူလေးကိုလည်းပရိသတ်တွေကသိကြမှာပါ။ Rဇာနည်နဲ့ ဝမ်းတုိ့ကမွေးတဲ့ သားငယ်လေးချစ်ချစ်တုန်လေးပါ။ သူလေးကို 2018 ဇန်နဝါရီလ ဆယ်ရက်နေ့ကမွေးတာဖြစ်လို့ အခုဆိုရင်တစ်နှစ်ပြည့်လုနီးပါးရှိနေပါပြီ။ အရမ်းကိုချောပြီးချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ချစ်ချစ်တုန်လေးကတော့ ဖေဖေရောမေမေပါ အရမ်းချစ်ရသလို ပရိသတ်တွေရဲ့အသည်းကျော်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လူရုပ်မပီခင်ကတည်းက မင်းသားတစ်ပါးလိုချောမောလွန်းနေလို့ ကောင်မလေးတွေရဲ့အိပ်မက်ထဲက မောင်လေးဖြစ်နေသူလေးပါပဲနော်။ ယွန်းဝတီလွင်မိုး ယွန်းဝတီလွင်မိုးနဲ့ ထက်ဦးလှိုင်တို့က မွေးထားတဲ့...
သူငယ်ချင်း ထူး​အောင်​ရဲ့ဖင်​တုပြဿနာကို​ဖြေရှင်း​ပေးလိုက်တဲ့ အားတီ
နိုင်​ငံ​ကျော်​ အဆို​တော်​တစ်​ဦးဖြစ်​တဲ့ အားတီဟာ သူ့ရဲ့သီချင်းမြူးမြူး​လေး​တွေ​ကြောင့်​ ပရိသတ်​​တွေကြားမှာ ​ရေပန်းစားသူတစ်​ဦးပါ။ အားတီရဲ့ သီချင်း​တွေကို ပရိသတ်​အများအပြားက ကြိုက်​နှစ်​သက်​ကြပြီး အား​ပေးလက်​ခံကြပါတယ်​။ အားတီက သူ့ရဲ့ အနုပညာသက်​တမ်းတစ်​​လျှောက်​မှာ တစ်​ကိုယ်​​တွေ အ​ခွေများစွာကို ထုတ်​လုပ်​​အောင်​မြင်​ခဲ့သူတစ်​ဦးလဲဖြစ်​ပါတယ်​။ အားတီ့ရဲ့ သူငယ်​ချင်းထူး​အောင်​ဟာ ရုပ်​ရှင်​ကန်​​တော့ပွဲအခမ်းအနားတစ်​ခုမှ ဓာတ်​ပုံတစ်​ပုံ​ကြောင့်​ ပြင်းပြင်းထန်​ထန်​​ဝေဖန်​ခံ​နေရတာပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ အားတီက သူ့သူငယ်​ချင်း ထူး​အောင်​ရဲ့ ပြဿနာကို အခုလိုပဲ ​ဖြေရှင်း​ပေးခဲ့ပါတယ်​။ “ထူးအောင်ရေ … ဖင်တု ဘယ်ကမှာလည်း ? ငါကတော့ အေးမြတ်သူ နဲ့ သင်ဇာ အပ်နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးကနေ အော်ဒါမှာတယ် ။ 🤣 မှီသလိုလို မမှီသလိုလို နဲ့…ငါပိုလှတယ် Htoo Aung 😂🤣😂🤣😂 စတာဘာ စတာဘာ !! မာဆယ်ကစားထားတဲ့သူတွေက ဒီတိုင်းဆို မသိသာဘူး။ ကော့စရာမလို ထိုင်လိုက်တာနဲ့ ဘေးကို ထင်းထွက်လာရော အဲ့လိုပါ။ အခွီတင်တာနော်။...
သားငယ်ဟာ အောင်မြင်တဲ့အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပေမယ့်လည်း အကြော်သည်ဘဝကို မစွန့်လွှတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ တစ်ချိန် က အကြော်သည်တစ်ယောက်နဲ့ လက်ရှိ အောင်မြင်တဲ့အဆိုတော် တစ်ယောက်ရဲ့ ကွဲပြားသွားတဲ့ ခံစားချက် တွေကို လည်း အခုလို ရင်ဖွင့်ပြောပြ လာပါတယ်။ အဆိုတော် သားငယ်ဟာ လက်ရှိမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ပိုင်ဆိုင်နေပေမယ့်လည်း အကြော်သည် တစ်ယောက်အဖြစ်ဆက်လက် ရပ်တည် နေတုန်းပဲလို့ဆိုပါတယ်။ အဆိုတော် ဖြစ်လာလို့လည်း အကြော်သည်ဘဝကို မစွန့်လွှတ်ဘူးလို့ ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါ တယ်။ ” အကြော်လုပ်ငန်းဆိုတာက ကျွန်တော့်အဖေရဲ့ လုပ်ငန်းမှာ ကျွန်တော့်မိန်းမက တစ်နေ့ကို တစ်ပြည် ၆၀၀၊ ၁၀ပြည် ၆၀၀၀ နဲ့ အလုပ်လုပ် ရတဲ့ အလုပ်သမားပါ။ အဲ့ဒါက အဖေ့ဆိုင် ကျွန်တော့်ဆိုင် မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်က အကြော်သည် အကြော်ဆိုင်ပိုင်ရှင်မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော် အဆိုတော်ဖြစ်လို့ ဝဲပစ်လိုက်ဆိုတော့လည်း ဘယ်သူက ဝဲမှာလဲ။ ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်ဖြစ်နေတာပေ့ါနော်”လို့...
အဆင်မပြေ ချို့တဲ့ပြီး ဘဝကိုရုန်းကန်နေရတဲ့ ငှက်ပျောသီးရဲ့မိသားစုအကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ဒိန်းဒေါင်
ဒိန်းဒေါင်ကတော့ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ပြည့်ခဲ့တဲ့ အသက် (၄၅) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးမှာ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ လုံချည်ကိုလျှော်ပြီး ကုသိုလ်ယူခဲ့တဲ့အပြင် မိခင်ကိုသိန်း တစ်ရာနဲ့ကန်တော့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒိန်းဒေါင်ကတော့ သူ့ရဲ့ မွေးနေ့လေးကို မြောက်ဥက္ကလာပက နေအိမ်မှာ ကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ ငှက်ပျောသီး (ခြိမ့်ကေကို) လည်း လာရောက်သီဆိုဖျော်ဖြေပေးတာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ လူရွှင်တော်ဒိန်းဒေါင်က ငှက်ပျောသီးကို ဆုံးမဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုလည်း ယခုလို ဖွင့်ပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “ခြိမ့်ကေကိုကို စပြီးတွေ့ တဲ့အချိန်တော့ ဆုံးမတယ် ပရိသတ်တွေ ဘယ်လောက်ပဲဆဲဆဲ၊ ဘာပြောပြောဘာမှ ပြန်မပြောရဘူး၊ ဘာမှပြန်မရေးရဘူး လူဆိုတာ ချစ်တဲ့လူရှိတယ်။ မုန်းတဲ့လူရှိတယ်။ အမြဲတမ်း ဆုံးမတယ် ကျတော်လည်း ကောမန့်တွေမှာတခါတလေကျရင်ပြောဆိုခံရတာတွေရှိတယ်။ အဲ့တော့ပရိသတ်တွေကိုပြောချင်တာက ကျတော်သူတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး ကလေးတွေအကုန်လုံးကို ဆုံးမတယ်။ သူတို့ဆီက ခုချိန်ထိ ကျတော် အကူညီတစ်ခုမှမတောင်းဖူးဘူး။ ကျတော်သာအလကားရိုက်ပေးတာတို့ အခု ငှက်ပျော်သီးတို့ဘာတို့ဆို အဝတ်အစားတွေပေးတာတို့ အဲဒါပဲရှိတယ်။” ” ပရိသတ်တွေ...
အုပ်စိုးခန့်အတွက် ဂုဏ်ပြုစကားပြောပေးလိုက်တဲ့ ယွန်းယွန်း
သရုပ်ဆောင် ယွန်းယွန်းက အုပ်စိုးခန့်ရဲ့ တစ်ကိုယ်တော် တေးစီးရီးအတွက် ဂုဏ်ပြုစကားပြောခဲ့ပါတယ်. အရွယ်ရောက်လာတာနဲ့ အမျှ လှပတဲ့ အသားအရေ လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်လာရတဲ့ အကြောင်းကိုလည်း အခုလိုပြောပြလာပါတယ် မကြာခင် တစ်ကိုယ်တော်အခွေ ထွက်ရှိလာတော့မယ့် အုပ်စိုးခန့် အတွက် သရုပ်ဆောင် ယွန်းယွန်းက ဂုဏ်ပြု အမှတ်တရ စကားပြောပြလာပါတယ်. ယွန်း ယွန်း နဲ့ အုပ်စိုးခန့်တို့ဟာ မကြာခဏ ဆိုသလို အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် အောင်မြင်စေဖို့ မီဒီယာတွေကနေတဆင့် ဆုတောင်း ပေးခဲ့ပါတယ် ” လူငယ်တွေ အခုလို ငယ်ငယ်လေးမှာ အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ဘဝမှာ မှတ်တိုင်တွေ လုပ်နိုင်တာ ညီမ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်. အများကြီးလည်း အောင်မြင်ပါစေ လို့ ညီမ ဆုတောင်းပေးပါတယ်. ညီမကို ချစ်ခင်ပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေ ကိုလည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်. ပရိသတ်တွေ ဆိုပေမယ့်လည်း ညီမအတွက် ကတော့...